မိမိတွင် COVID-19 ရောဂါ”ကိုယ်ခံအား(Antibody)” ထွက်ခြင်းရှိမရှိ မှန်ကန်တိကျစွာစစ်ဆေးနိုင်တော့မည့် သတင်းကောင်း
Pacific-AA Foundation , AA Medical Products Ltd , CSR activity , Covid-19 , Antibody Test
🔹Covid-19 ရောဂါ ကိုယ်ခံအား မိမိတွင် ထွက်မထွက် သိရှိရန်စစ်ဆေးသည့် ယုံကြည်စိတ်ချမှန်ကန်သည့် Roche Elecsys Anti SARS-CoV-2 reagent အသစ်သည် မေလ၊၂၀၂၀ တွင် ကမ္ဘာကျော် Roche Diagnostics ကုမ္မဏီက တီထွင်ထုတ်လုပ်လိုက်ပါပြီ။ ၂၀၂၀၊ မေလ (၂)ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံFDA တွင် မှတ်ပုံတင်ရခဲ့ပြီး EU နိုင်ငံအသိအမှတ်ပြု CE mark လည်းရရှိပြီး US, UK, Australia အပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း (၉၈)နိုင်ငံမှ မှာယူတင်သွင်း သုံးစွဲနေကြပြီဖြစ်သည်။ ▪️ထို reagent (Covid-19 antibody test) ဟာ ဘယ်သူတွေ Covid-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီးပြီလဲ? ဒါမဲ့ ထိုလူတွေကူးစက်ခံရတာကို ယခင်က မစစ်ဆေးလို့၊ ရောဂါလက္ခဏာမပြလို့ မသိခဲ့ဘူးဆိုရင် အခုသိနိုင်ပါပြီ။ 🔹 https://www.linkedin.com/posts/roche_covid19-activity-6665575058884317184-SIQI လေ့လာချက်များအရ ကိုယ်ခံအားထွက်နေတယ်လို့ အထက်ပါ immunoassay test (Covid-19 Antibody test) မှာ positive ပြရင် သူ့မှာကိုယ်ခံအားထွက်နေပြီ (သို့) ထိုသူဟာ Coronavirus ပြန်ကူးခံရရင်တောင် ကိုယ်ခံအားမရှိတဲ့သူနဲ့ယှဉ်ရင် ရောဂါအခြေအနေဆိုးရွားမှူလျော့နည်းနိုင်တယ်ဆိုတာ သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ confirmationအတွက် နှစ်ကြိမ်စစ်ရာမှာ နှစ်ကြိမ်လုံးnegative ပြတယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်လို့ရပြီ.....လို့သိရပါတယ်။ ▪️ https://www.linkedin.com/posts/roche_covid19-activity-6665575058884317184-SIQI ထပ်မံလေ့လာချက်များအရ Covid-19 ရောဂါဖြစ်ပြီးပြန်ကောင်းလာသူများကိုလည်း ကိုယ်ခံအားထွက်နေပြီလားဆိုတာသိရန်လည်း စစ်လို့ရပါတယ်။ ဒီ test ကိုသုံးပြီး Covid-19 ကာကွယ်ဆေးပေါ်လာတဲ့အခါ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးရင် ထိရောက်ရဲ့လား? ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ကိုယ်ခံအားထွက်ရဲ့လားဆိုတာ သိရအောင်လည်းစစ်လို့ရပါတယ်။ ဒါမှသာ ကာကွယ်ဆေးအောင်မအောင်သိရမှာပါ။ 🔹ဒါပြင့် ဒီ test လုပ်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်ခံအားမထွက်တဲ့လူ၊ Covid-19 တခါမှကူးစက်မခံရသေးတဲ့သူကိုဦးစားပေးကာကွယ်ဆေးထိုးပေးရန် စီစဉ်လို့ရပါပြီ။ ▪️မြန်မာပြည်လူဦးရေရဲ့ ၆၀-၇၀%ကိုစစ်လိုက်နိုင်ပါက ထိုလူဦးရေမှာ ကိုယ်ခံအားတွေထွက်နေပြီဆိုရင် Covid-19 virus ဟာမြန်မာပြည်မှာ ဆက်ပြန့်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးဆိုတာသိရပါမယ်။ 🔹အဆိုပါ reagent (Covid-19 antibody test) သည် Real Time PCR test ထက် အဆပေါင်းများစွာစျေးသက်သာပြီး သွေးထုတ်စစ်ဆေးရသဖြင့် စစ်ဆေးရန်နည်းလမ်းမှာလွယ်ကူရိုးရှင်းပါသည်။ (Cobas 6800 စက်နှင့်တွဲဖက်သုံးစွဲရသည့် နှာခေါင်း/အာခေါင်တို့ဖတ်ဖြင့် COVID-19 ရောဂါရှာဖွေရေးဆေးရည် reagent (RT PCR test) သည် US$25 ကျသင့်ချိန်တွင် အခုအသစ်ပေါ်လာသော COVID-19ရောဂါ ကိုယ်ခံအားရှိမရှိရှာဖွေသည့်ဆေးရည် reagent (COVID-19 Antibody test) သည် US$2.5 သာကျသင့်ပါသည်) ▪️ထို့အပြင် အများသိနေသော မတိကျမမှန်ကန်သည့် အိပ်ဆောင်သယ်ယူလို့ရသော Rapid Diagnostics Test kit လည်းမဟုတ်ပါ။ Roche Cobas e411 စက်သုံး၍စစ်လျှင် တစ်နေ့လျှင် 300 tests စစ်နိုင်ပြီး Roche Cobas e601စက်ဖြင့်စစ်လျှင် တစ်နေ့လျှင် 800 tests စစ်နိုင်ပါသည်။ တိကျမှူမှာ SARS-CoV-2 Virus ပိုးနှင့်ပတ်သတ်လျှင် 99.8% specific ဖြစ်ပြီး 100% sensitive ဖြစ်ပါသည်။ 🔹ထိုအသစ်ပေါ်လာသော Covid-19 ကိုယ်ခံအားထွက်မထွက်သိရှိရန်စစ်သော Elecsys Anti SARS-CoV-2 reagent အသစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံ​၏ အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိက နှင့်တပ်မတော် ဆေးရုံများတွင် ရှေးယခင်ထဲကရှိပြီးဖြစ်သော Roche Cobas e411, Cobas e601, Cobas e801 analyser စက်များတွင် ထည့်၍ စစ်လို့ရပါသည်။ 🔹အထက်ပါ Roche Cobas e411, Cobas e601, Cobas e801 analyser စက်များသည် ရှေးယခင်ကတည်းက အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိက၊ တပ်မတော်ဆေးရုံများနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် Hepatitis B, Hepatitis C, HIV ​ရောဂါများနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိုယ်ခံအားထွက်မထွက်ရှာခြင်းတွင်၎င်း၊ Cancer ရောဂါများအခြေအနေဆန်းစစ်၍ ကုထုံးများဆုံးဖြတ်ရာတွင်၎င်း၊ လူနာ​၏ဟော်မုန်းရောဂါအခြေအနေစစ်ဆေး၍ ကုထုံးဆုံးဖြတ်ရာတွင်၎င်း၊ နှလုံးရောဂါ၊ အရိုးရောဂါ၊ သွေးအားနည်းရောဂါများတွင် ကုထုံးကို စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရန်၎င်း အထောက်အကူပြု စစ်ဆေးမှူအဖြစ် ဆရာဝန်များ၊ ဆေးရုံများမှ ကျယ်ကျယ်ပြန့်သုံးနေကြသော စက်ဖြစ်ပါသည်။ ▪️ယခု အသစ်ပေါ်ထွက်လာသော Elecsys Anti SARS-CoV-2 reagent အသစ် (Covid-19 Antibody test) ကိုအသုံးပြုပြီး (၁)ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအားလုံးကို၎င်း၊ (၂)ရောဂါပြန့်ပွားမှူများနေသော နေရာဒေသရှိပြည်သူများကို၎င်း၊ (၃)သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းများ၊ (၄)ပရဟိတစေတနာရှင်များ၊ (၅)ကျောင်းပြန်တက်ကြမည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို စစ်ပေးခြင်းဖြင့် COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရမှူရှိမရှိခွဲခြားနိုင်ပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိသူနှင့် ကူးစက်ခံရလွယ်သူများအဖြစ် အုပ်စုခွဲခြားနိုင်ပါမည်။ ထို့အပြင် ယခု Covid-19 antibody test ကို အသုံးချလျှက် ၁)Convalescence Plasma ကိုကုသရေးအတွက်အသုံးပြုလိုပါက Antibody positive သွေးများကြိုတင်စုဆောင်းထားနိုင်ခြင်း။ ၂)အမှန်တကယ်ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်ကို အတိအကျသိခြင်းအားဖြင့် ရောဂါ ကာကွယ်၊ ကုသ၊ ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် ချမှတ်ထားသောအစီအစဉ်များ ထိရောက်မှူရှိမရှိဆန်းစစ်ရန်နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း။ ၃)ကာကွယ်ဆေးထွက်ပေါ်လာချိန်တွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှူကို အရေးကြီးသည့် အုပ်စုအလိုက် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်အဆင်သင့်ဖြစ်စေခြင်း။ ၄)ရောဂါကင်ရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်ပေးနိုင်ခြင်း။ စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။ Real time PCR စစ်ဆေးမှူသည် ယခုလိုကပ်ရောဂါအခြေအနေတွင် ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်သဖြင့်၎င်း၊ တစ်ကမ္ဘာလုံး PCR test များအလုံအလောက်မရသဖြင့် အားလုံးစစ်နိုင်ဖို့ရန်ခက်ခဲသည့် အတွက်ကြောင့်၎င်း၊ ယခု Covid -19 Antibody test ကို အထက်ပါကိစ္စများအတွက် သုံးရန်အလွန်သင့်တော်ပါသည်။
donation , AA Medical Products Ltd , CSR activity , COVID19
1. One Cobas 6800 analyzers (made in Switzerland) that can automatically, quickly, and efficiently test for COVID-19. 2. A reagent (made in the U.S.) that can detect diseases in over 1100 people alongside the Cobas 6800 analyzer. 3. The donation for the renovation (including air-con and lab fixtures and fittings) of the National Health Laboratory’s (NHL) Virology Lab ..... was worth 835.2 million kyats. This sum of money was donated today (Sunday, April 5th, 2020) to the National COVID-19 Central Committee (which is dedicated to protecting and curing citizens from and managing COVID-19).
Boost Your Success With Oramin-C
Oramin-C , free show
Oramin-C ကနေကျင်းပမယ့် "Boost Your Success With Oramin-C" ပွဲကြီးကို ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့ Junction Square မှာ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Merry Christmas & Happy New Year 🎄🌟❄️🎁 ပျော်ရွှင်စရာ စရစ်စမတ်နှင့် မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်ကူးအခါသမယကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ AA Medical Products Ltd , Pacific-AA Group မှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ် 🙏
Pacific Alpine Myanmar (a member of Pacific-AA Group) received "2019 AMCHAM CSR Excellence (ACE) Award"
Pacific-AA Group , CSR activity , AMCHAM , Pacific Alpine Myanmar
Pacific Alpine Myanmar (a member of Pacific-AA Group) received "2019 AMCHAM CSR Excellence (ACE) Award" asa3rd time for3consecutive years (2017-2019) which was given by the American Chamber of Commerce in Myanmar (AMCHAM) and reaching to Silver Level.
AA Medical Products Ltd. ၏ မိဘပြည်သူများသို့အသိပေးခြင်း။
AA Medical Products Ltd. ၏ မိဘပြည်သူများသို့အသိပေးခြင်း။ AA Medical Products Ltd. သည် (၁၉၉၆) ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံရှိအကြီးဆုံး နှင့်အကျယ်ပြန့်ဆုံး ဆေးဝါးတင်သွင်းဖြန့်ချီရေးကုမ္မဏီများအနက်တွင် တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်ပါသည် ။ AA Medical Products Ltd. မှ တင်သွင်းဖြန့်ချိလျှက်ရှိသော FDA အသိအမှတ်ပြု အရည်အသွေးမြင့်ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများကို AA Medical Products Ltd. ၏ တရားဝင် E-Commerce website ဖြစ်သော onlineshop.aa.com.mm တွင် ဆေးဝါးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများကို ဖော်ပြထားလျှက်ရှိပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာဝယ်ယူနိုင်သကဲ့သို့ Facebook စာမျက်နှာများဖြစ်သော AA Medical Products Ltd. Page နှင့် Pacific AA Online Shop Page များတွင် လည်း လေ့လာစုံစမ်းနိုင်ပါသည် ။ ထို့အပြင် AA Medical Products Ltd. နှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များဖြစ်သည့် Company logo , Address , Invoice , Page Name တို့ကို ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ အတုအပပြုလုပ်ခြင်း ၊ ဆင်တူယိုးမှားပြုလုပ်ခြင်း ၊ AA Medical Products Ltd. Page နှင့် Pacific AA Online Shop Page အမည်များအသုံးပြု၍ လိမ်လည်ခြင်း အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခြင်းများကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ဥပဒေအရ ထိရောက်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လေးစားစွာဖြင့်အသိပေးအပ်ပါသည် ။
Fluza မှ” စီစဉ်ကျင်းပသည့် “အအေးမိ ၊တုပ်ကွေး၊ဖျားနာ Fluza ဖြင့်ကာကွယ်ပါ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Fluza ဟာသဖလား ပြိုင်ပွဲ အား Media များမှတဆင့် အသိပေးခြင်း Press Conference
Fluza မှ” စီစဉ်ကျင်းပသည့် “အအေးမိ ၊တုပ်ကွေး၊ဖျားနာ Fluza ဖြင့်ကာကွယ်ပါ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Fluza ဟာသဖလား ပြိုင်ပွဲ အား Media များမှတဆင့် အသိပေးခြင်း Press Conference ကို Oct လ 17 ရက် နေ့ တွင် Pacific AA Group ၏ Head Office ဖြစ်သော အမှတ် (၈၁) လှည်းတန်းလမ်း နှင့် အင်းစိန်လမ်းထောင့် တွင်တည်ရှိသည့် Pacific AA Tower မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့ပါသည်။
AA Medical Products Ltd moving to New Office
New Office Address , AA Medical Products Ltd , Pacific AA Tower
Our AA Medical Products Ltd (Pacific-AA Group) has moved to new office, Pacific AA Tower at No.81, Insein road (Corner of Hledan road), Kamayut Township, Yangon on 22.7.2019 (Monday).
donation , Pacific-AA Foundation , Thae Inn Gu Religion Propagation
ပါရမီရှင်သဲအင်းဓမ္မရိပ်သာ၊ ဗောင်းတော်ချုပ်ဘုရားလမ်း၊ တွံတေးမြို့၌ အသစ်တည်ဆောက်မည့် နှစ်ထပ်ရှိသော ဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးတစ်ခုလုံးအတွက် ကုန်ကျစရိတ်အားလုံး သိန်း ၂၅၀၀ ကျပ် အပြင် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်တွက် နောက်ထပ် သိန်း ၁၅၀၀ ကျပ် (စုစုပေါင်း သိန်း ၄၀၀၀ ကျပ်)လှူဒါန်း